Sida loo sameeyo xarig qaanso: qalabka iyo tilmaamaha tallaabo-tallaabo | Ragga Stylish
Jarmal Portillo | | Dhameystirka
Xiriirka qaansoleyda kaliya looguma talo gelin dharka arooska ama dacwadaha guud ahaan. Marar badan waxaa jira rag doonaya inay ku kabaan qaabka shaatigooda inbadan oo xarig ah marka loo eego xarigga. Hadday sidaas tahay, halkan waxaan ku bari doonaa sida loo sameeyo xarig qaanso tallaabo tallaabo ah. Sababtoo ah guriga adiguba waad sameyn kartaa adiguna wuxuu la mid noqon doonaa midka la iibsaday.
Ma rabtaa inaad wax baratid sida loo sameeyo xarig qaanso? Sii wad akhriska 🙂
1 Qalabka loo sameeyo qaanso isku xidhka
2 Diyaarso qalabka
3 Sameynta xarigga qaansada
4 Waxyaabaha lagu xiro qaanso-qaansiga
Qalabka loo sameeyo qaanso isku xidhka
Sameynta xarig qaanso lafteedu ma aha mid aad u fudud sidoo kale, maadaama qalabka ay tahay in la helo. Waa suurtagal in haddii hooyadaa ama ayeeyadaadu ay jecel yihiin tolida ay yeelan karto qaar ka mid ah qalabkan, laakiin waa iska yar tahay. Si aad u sameyso xarigga qaansada waxaad u baahan doontaa ugu yaraan nus mitir dhar ah marka lagu daro:
Hal mitir oo isdhexgal ah
Marka ugu horeysa waa inaan ka sameysannaa shaashadda xarig qaanso. Waxaa laga yaabaa inaad haysato xariga qaanso oo waxtar leh oo aad u isticmaali karto si aad u sameysid shaxankaaga. Waraaqda waad isku laaban kartaa oo qalinka waxaad ku raadin kartaa dulmar. Qaabkan waxaan ka sameyn karnaa shaashadda xarigga qaanso hore loo dhigay.
Haddii aadan haysan xarig qaanso si aad u sameysid shaxanka, ha ka welwelin, waxaan ku tusi doonnaa sida loo sameeyo iyada oo aan qaanso xarig lahayn. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad ku cabirto qoortaada oo aad u qaybiso qiyaasta wadarta laba. Tani waxay na siin doontaa cabbirka qoorta nuska si aan u awoodno inaan samaysanno shaxanka. Marka xigta, waxaan jiidaneynaa leydi ilaa inta ugu macquulsan si ay u gaarto cabirka qoorta nuska iyo waxaan dhigeynaa qiyaastii 2 cm. Waxaan leenahay template qaansada isku xidhka.
Si loo sameeyo xargaha qaansada waxaan u baahanahay inaan si wanaagsan u diyaarino qalabka si ay u fiicnaato. Waxa ugu horreeya waa in la jaro template-ka si loogu helo tixraac ahaan. Si tan loo sameeyo, waxaan isticmaali doonaa maqaska. Kadibna dharka ayaan kala laaban doonaa. Waxaan hubin doonnaa, markay tahay laalaabka, waa ballaadhan yahay si loo waafajiyo goynta laga sameeyay template. Inbadan oo isku mid ah labaduba waa, sida ugufiican ayey noqon doontaa.
Waa inaad ka fikirto in shaxanka lagu sameeyay cabbirka saxda ah ee qoortaada iyo ballaca saxda ah. Haddii markaan goyno oo laalaabno aynaan si sax ah u yeelin, waxaan sameyn doonnaa khaladaad aan jiidi doonno illaa aan ka ogaano in xarigga qaansadu aanu ahayn cabirkeenna ama dhadhankeenna.
Markaan gooyno oo aan laalaabanno, waxaan ku dhejineynaa shaashadda laabashada. Waxaan u adeegsannaa gabal nuurad ah oo aan ku soo jiidan doonno soohdimaha ku xeeran shaxanka. Waxaan ku sameyn doonnaa xariijin isdaba joog ah si dulmarku u noqdo mid cad. Waxaan ku darnaa gunnada tolidda si loo hubiyo in marka la isticmaalayo mashiinka tolidda, cabbirku ay noogu habboon yihiin. Fikrad ahaan, ku dar 1 cm hareeraha muuqaalka kore lagu sameeyey nuurad. Xaaladdan oo kale waxaan ku sameyn doonnaa xariiq jajab ah si aan si cad u kala soocno xadka.
Marka wax waliba diyaar yihiin, waxaan goyn doonaa dharka oo waxaan ku celin doonnaa habka aan u sameyno xarig qaanso kale oo siman.
Sameynta xarigga qaansada
Waxaan horeyba u haysannay labada dhar ee xargaha xargaha. Hadda waa inaan dhex dhignaa isdhexgalka. Isku xirnaanta waa inay ahaataa dhexda. Markii aan dhex dhigeyno shaashadda waa inaan tixgelin siino inay tahay mid ballaaran oo ku habboon shaxanka oo dhan.
Waxaan ku dhejineynaa shaashadda duubkeeda waxaanan raadinaynaa dulmar. Kadibna waan jareynaa oo aan ku celineynaa habka markaa isku xirnaanta waxay ku jirtaa labada qaybood. Xaaladdan oo kale, xitaa haddii dharku isku mid yahay, ma jiri doono gunno tolmo oo waxaan ku dhejin doonnaa dhabarka dharka.
Hadda aan u gudubno shirkii qaanso-xirka.
Labadii qaybood ee marada ayaan dhinacyada midig ka wada saarnay.
Waxaan ku tolannaa qaanso-qaanso, markasta oo la ixtiraamo 1 cm gunnada tolida. Sida aan u toleyno waa inaan xisaabta ku darsanaa in looga tago meel 3 cm dhinac ah oo dhererkeedu yahay xarigga qaansada.
Waxaan jarnay gunnadii tolida si aan ugu soo dhowaanno tolliinka sida ugu macquulsan. Sidan ayaan si sax ah ugu tolan karnaa.
Waxaan u rogi karnaa xarigga qaansada gudaha iyo dibedda si aan ugu isticmaalno faakiyuumka aan ka tagnay ee 3 cm dheer. Haddii ficilkani kugu adag yahay inaad fuliso, waxaad isticmaali kartaa caday si aad dharka ugu rogtid gudaha.
Waxaan xiraneynaa qaanso xariga si loo fariisto dunta.
Waxaan tolayaa farqiga u xiran iyadoo la isticmaalayo cirbadda ugu fiican ee lagugu tolo. Sidan, tolliintu si dhib yar ayaa loo ogaan karaa.
Waxyaabaha lagu xiro qaanso-qaansiga
Sidaan ognahay, waxaa jira kumanaan nooc oo xiriir ah qaansooyinka, iyo sidoo kale xiriiro. Waxaan abuuri karnaa qaabkeena annaga oo isticmaaleyna noocyo kala duwan oo dhar ah ama midabbo ah. Waa la hubin karaa, xariijimo, jilicsan, maro jilicsan, iwm. Haddii aan dooneyno qaanso xarig oo loogu talagalay wax aan sidaa u sii buurnayn, waxaan ku abuuri karnaa daabac suuf ah.
Waxaan sidoo kale sameyn karnaa xargaha qaanso maalmaha aan yeelanno xaflad carnival ama dharka. Tan waxaan u isticmaali karnaa qaab lagu daro qaanso-qaanso ama la dhigo qaansoroobaad taasoo ka dhigaysa midab badan.
Si aad u hesho macluumaad waxtar leh, waxaan kuu sheegaynaa dharka ay suunka xariggu ku caawin karo ama ay tahay inaadan ku labisan. Waa kaabayaal dhinacyo ah in la tixgeliyo. Midka koowaad ayaa ah haddii ay tahay markii ugu horreysay ee aad xirato, waxaad dooran kartaa kuwa cad. Markaad la qabsato oo aad ula muuqato mid raaxo leh, waxaad u gudbeysaa kuwa daabacan. Way ku habboon yihiin inay xirtaan tuxedos ama suudh.
Dhar noocee ah inaadan ku xidhnayn qaanso qaanso? Waxay umuuqataa mid aan maskax laheyn, laakiin way kafiican tahay ha ku xidhnayn shaadhka polo ama funaanado. Isku-dhafka saxda ah waa jaakad ama shaati-gacmeed dhaadheer.
Waxaan rajeynayaa in talooyinkaan oo dhan aad ku baran karto sida loo sameeyo xarig qaanso oo aad ugu raaxeysato xafladda xigta ama dhacdada aad leedahay. Nala soo socodsii haddii casharkaan uu ku caawiyay 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Dhameystirka » Sida loo sameeyo xarig qaanso